Fiteny hebreo vaovao - Wikipedia
Ny fiteny hebreo vaovao (hebreo: עברית חדשה /ʿivrít ħadašá[h]) dia karazan' ny fiteny hebreo izay ampiasaina na am-bava na an-tsoratra nanomboka tamin' ny fiafaran' ny taonjato faha-19. Miavaka izy noho izy lasa fiteny velona, notenenin' ireo Siônista aloha, avy eo nampiasain' ny ankamaroan' ny Israeliana, taorian' ny taonjato maro nahafaty ny fiteny hebreo sy naha fiteny amin' ny fanompoam-pivavahana fotsiny azy. Nahazo aina toy ny nateraka indray ny fiteny hebreo tamin' ny taonjato faha-20 vokatry ny asan' i Eliezer Ben Yehudah tamin' ny andron' ny atao hoe Haskala (השכלה). Tombanana ho manodidina ny 6 tapitrisa ny isan’ ny mpiteny hebreo.
Fifohazan' ny fiteny hebreo indray[hanova | hanova ny fango]
Ny fiteny hebreo dia lasa fiteny maty teo anelanelan’ ny taona 200 sy 400 tany ho any, ka nihena taorian’ ny fikomian’ i Bar Kokhba tamin’ ny 132–136, izay nandrava ny mponin’ i Jodea. Taorian' ny sesitany ny fiteny hebreo dia nanjary voafetra tamin' ny fampiasana litorjika.
Ny fiteny hebreo dia nampiasaina tamin' ny fotoana samihafa sy noho ny tanjona maromaro nanerana ny Diaspôra jiosy, ary nandritra ny Yishuv Taloha (היישוב הישן / haYishuv haYashan: vahoaka jiosy tany amin' ny faritany atsimo amin' i Siria tamin' ny vanim-potoana ôtômàna) dia nanjary fiteny fampiasa tao amin' ny Jiosin' i Palestina izany. Avy eo i Eliezer Ben-Yehuda dia nitarika ny famohazana ny fiteny hebreo ho fitenin-dreny tamin’ ny faramparan’ ny taonjato faha-19 sy ny fiandohan’ ny taonjato faha-20. Ny fiteny hebreo môderina dia nampiasa hasinteny sy tsirinteny hebreo ara-Baiboly, tsipelina sy fitsipi-pitenenana misnaika, ary fanononana sefarada. Maro ny fomba fiteny sy kalka natao tamin' ny fiteny idisy. Ny faneken' ireo Jiosy mpifindra monina voalohany nankany Palestina ôtômana azy dia vokatry ny fanohanan' ireo fikambanan' i Edmond James de Rothschild tamin' ny taona 1880 sy ny sata ôfisialy azony tao amin' ny lalàm-panorenan' ny Mandata Britanika ho an' i Palestine tamin' ny taona 1922. Nampiasa teny 8.000 avy ao amin’ ny Baiboly sy teny 20.000 avy amin’ ny famoaboasana nataopn' ny raby Ben-Yehuda. Teny vaovao maro no nindramina avy amin’ ny fiteny arabo, noho ny fototeny semitika iombonan’ ilay fiteny amin’ ny fiteny hebreo, saingy novana mba hifanaraka amin’ ny fônôlôjia sy ny fitsipi-pitenenana hebreo, ohatra ny teny hoe gerev (milaza tokana) / garbayim (milaza maro) ankehitriny dia ilazana ny “bakiraro”, izay filaza fohy ny teny arabo hoe ğuwārib ("bakiraro"). Fanampin' izany, ireo Jiosy mpifindra monina voalohany, nindrana tamin' ny fiteny arabo teo an-toerana, ary ireo mpifindra monina avy any amin' ny tany arabo tatỳ aoriana dia nampiditra teny indrana avy amin' ny teny arabo (toy ny hoe na'ana, zaatar, mishmish, kusbara, ḥilba, lubiya, hummus, gezer, rayḥan, sns. .), ary koa ny ankamaroan’ ny fitenenana hebreo môderina. Na dia eo aza ny filazana an’ i Ben-Yehuda ho mpanavao ny fiteny hebreo, ny poeta Haim Nahman Bialik no tena namokatra teny hebreo vaovao.
Ny iray amin' ireo tranga hita tamin' ny fifohazan' ny fiteny hebreo dia ny fiovan-kevitry ny anarana taloha sasany ho amin' ny heviny vaovao samihafa, toy ny bardelas (ברדלס), izay midika hoe "hiena" amin' ny teny hebreo misnaîka, fa amin' ny teny hebreo vaovao dia midika hoe "geparda;" na shezīph (שְׁזִיף) izay ampiasaina amin' izao fotoana izao hilazana ny "paisom-bazaha" (frantsay: prune), fa nidika hoe "mokonazy" taloha. Ny teny hoe kishū’īm (“kôkômbra” taloha” dia anondroana karazana voatavo fahavaratra (Cucurbita pepo var. cylindrica), zavamaniry iray avy amin' ny Tontolo Vaovao. Ohatra iray hafa ny teny hoe kǝvīš (כביש), izay midika hoe “lalana” ankehitriny, nefa tena mpamari-toetra arameana midika hoe “voahitsakitsaka" na "mirehitra”, fa tsy anarana mahazatra. Tany am-boalohany dia nampiasaina mba hilazana ny “lalana misy balizy.” Ilay voninkazo antsoina ankehitriny hoe kalanit (Anemone coronaria) ankehitriny dia nantsoina tamin’ ny teny hebreo hoe shoshanat ha-melekh (“voninkazon' ny mpanjaka").
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fiteny_hebreo_vaovao&oldid=1042816"
Voaova farany tamin'ny 9 Janoary 2022 amin'ny 06:59 ity pejy ity.